Irenti yenyanga iyafumaneka! Ibhedi esemgangathweni! Ithafa yokujonga indawo ephezulu/isikhululo sikaloliwe esihamba ngaphantsi komhlaba/indawo yokupaka simahla emini/ngokuthe ngqo kwiChunxi Road/kufuphi neJianshe Lane Snack Street - I-Airbnb
Irenti yenyanga iyafumaneka! Ibhedi esemgangathweni! Ithafa yokujonga indawo ephezulu/isikhululo sikaloliwe esihamba ngaphantsi komhlaba/indawo yokupaka simahla emini/ngokuthe ngqo kwiChunxi Road/kufuphi neJianshe Lane Snack Street
Izimvo eziyi-1 187
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu嘉来·公寓
Molo, wamkelekile ekhaya~ Ukuba uluhlu lwakho oluthandayo lubhukishwe ngokupheleleyo, ungacofa kwi-avatar yomnini-mhlaba ukujonga uluhlu olumnandi ngakumbi
Ifumaneka kwindlela eseMantla yesiBini yeRingi yaseChengdu, hamba imizuzu emi-5 ukuya kweli-10 ukuya eLijiatuo Metro Line 3 Phuma ku-B, thatha umgaqo ongaphantsi malunga nemizuzu eli-10 ukufika [eChunxi Road, Taikoo Li, IFS], kwaye malunga nemizuzu eli-10 ukufika [ Isiseko sePanda].
Indawo yendlu yi-27 square metres, kwaye ibonelela ngebhedi ephindwe kabini ye-1.5m * 2m. Ukwahlula okumanzi kunye nokomileyo kwindawo yokuhlambela.
Iseti epheleleyo yezixhobo zekhaya ezinophawu, iifriji, oomatshini bokuhlamba, amanzi ashushu iiyure ezingama-24, iTV ye-Intanethi, iWiFi, izomisi enwele, iiketile, njl.njl. endlwini, izinto zokulala, iitawuli kunye neetawuli ziyatshintshwa zize zibulawe iintsholongwane kundwendwe ngalunye.
Iiyure ezingama-24 phambi kwedesika ukukubonelela ngenkonzo enolwazelelelo nangaliphi na ixesha
Kukho indawo yokupaka engaphantsi komhlaba kwesi sakhiwo.Ukupaka simahla emini kwaye kuhlawuliswa ubusuku bonke (11:00pm ukuya ku-8:00am ngosuku olulandelayo, 7 yuan ngeyure) Nceda ujonge umgangatho wokutshaja kwangaphambili.
Amagumbi onke amkela isimbo sokuhombisa esilula kunye nesanamhlanje, ifanitshala yeSophia, iseti epheleleyo yezixhobo zekhaya zohlobo endlwini, iTV yeXiaomi 4K enenkcazo ephezulu, umatshini wokuhlamba ozenzekelayo weHaier, i-air conditioner yeMidea, isifudumezi samanzi eHaier, ifriji ezimeleyo yeHaier; uboya dryer, ukwandiswa kwendawo yokuhlala, sticker iinwele, ibhrashi yamazinyo, ikama, Ukuhlamba ikepusi, njl kufuneka epheleleyo. Umandlalo yimpahla yokulala ye satin ecocekileyo ekumgangatho ophezulu.
4.95 out of 5 stars from 1187 reviews
4.95 · Izimvo eziyi-1 187
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi1 187
Ezantsi sisitalato sorhwebo, esinazo zonke iintlobo zesnack, imbiza eshushu, iskewers, kunye nezitya zeSichuan. Ikwakufuphi kakhulu ne-Internet celebrity iJianshe Road Snack Street (icetyiswa yonke imihla). Yindawo yokuhlala ekumele ube nayo kubathandi bokutya. ~
Umbuki zindwendwe ngu- 嘉来·公寓
Izimvo eziyi-1 220
Idesika engaphambili yeeyure ezingama-24, ikulungele ukukubonelela ngenkonzo enolwazelelelo
Ngokweemfuno zoluntu lwasekuhlaleni, ikhadi lesazisi liyafuneka xa ubhalisa xa ungena